Mgbe akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-anabata ụlọ akwụkwọ, ọ na-anabata ndị obodo
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Mgbe akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-anabata ụlọ akwụkwọ, ọ na-anabata ndị obodo
Akụkọ Antigua & Barbuda • Akụkọ Bahamas Breaking • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • omenala • Education • Akụkọ Grenada na -agbasa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mgbe Gordon “Butch” Stewart meghere Sandals Resort mbụ ya, o nwere otu iwu dị oke mkpa: a ga-achọ ebe ezumike ahụ ka o were ụlọ akwụkwọ na obodo. Ndị otu egwuregwu ga-elekọta ya ma hụ na ụlọ ọrụ na ụmụ akwụkwọ nwere ihe dị mkpa iji nwee ọganiihu. Nke ahụ karịrị afọ iri atọ gara aga, na mbido ụlọ ọrụ itinye aka na obodo na ọdịnala ọrụ na Sandals Resorts International (SRI) azụlitewo.
Stewart, Onye isi oche na onye guzobere Sandals Resorts na Resorts Resorts na-ekwu, "Anyị nwere akụrụngwa ime ihe,"
Taa, achọrọ ebe ọ bụla a na-ahụ maka ọkọlọtọ Sandals Resorts InternationaI ka anyị were ụlọ akwụkwọ na ụfọdụ ụfọdụ obodo niile iji hụ na ekesara ozi ahụike, nchekwa, nchegbu gburugburu ebe obibi, obodo na ohere dịka o kwere mee. Site na inye aka ịnye ụlọ ọrụ kọmputa ọhụụ na iwulite klas ndị ọzọ iji nye agụmakwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ na-enwu gbaa ma bụrụ ndị nọ ná mkpa na ụbọchị ọrụ nnabata, ndị otu egwuregwu SRI na-enye ndụmọdụ mgbe niile ma soro ndị agbata obi ha nọ na Caribbean kerịta ihe ọmụma na akụ ha.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na obodo.
Na 2007, Sandals Resorts nwetara Condé Nast Traveler World Savers Award maka mmemme Adopt-A-School na ọrụ ha na mpaghara Caribbean. Kemgbe ihe karịrị afọ 25, Condé Nast amatala ụlọ oriri na ọ hotelsụ bestụ kacha mma n'ụwa, ụgbọ mmiri, na ụgbọ elu.
Sandals and Resorts Resorts nke ama ama na ụwa niile agbanweela site na otu akara na otu ebe ezumike na Montego Bay, Jamaica, ka ọ bụrụ otu n'ime aha nnabata ọbịa ama ama na ụwa. Na ụdị 5 na njirimara 24 na mba 7 gụnyere Antigua, The Bahamas, Grenada, Barbados, Jamaica, Saint Lucia, na ndị Turks na Caicos, Sandals and Beads Resorts bụ onye ndu a na-atụghị anya ya nke ahụmịhe ezumike ezumike Caribbean ma na-anọgide na-agbasi mbọ ike na mpaghara ahụ, na-enyefe n'onwe ya na mmepe mmepe ọhụụ na n'okwu nke Onye isi oche na onye guzobere Gordon "Butch" Stewart, "gafere atụmanya" maka ndị ọbịa, ndị mmekọ, na ndị na-akpọ ụlọ Caribbean.